Sida loo Download Hulu Plus Videos Si fudud ku Mac
> Resource > Download > Sida loo Download Hulu Plus Video ku Mac la One Click
Hulu, sida mid ka mid ah goobaha video ugu caansan, wuxuu bixiyaa kala duwan videos daboolaya muujinaya TV, filimada, webisodes, isjiidka, clips iyo wax ka badan. Intaa waxaa dheer, in badan oo videos waa bilaash, halka sidoo kale waxaad dooran kartaa in aad isku qori Hulu daray inay helaan content dheeraad ah. Asal ahaan, Hulu Free iyo Hulu Plus waxay bixiyaan oo kaliya adeegyada geeyo oo waxaa jira wax aan kala soo bixi videos for offline loo maqli karo. Si kastaba ha ahaatee, la Wondershare AllMyTube for Mac , wax walba waa suurto gal. Waxay ku siisaa awood ay ku soo bixi wax kasta oo video laga Hulu on Mac iyo diinta ku soo bixi Hulu videos in qaab kasta oo ku haboon kombuyuutarrada gacanta aad. Waxaan qaadan doonaa eegno sida ay u soo bixi Hulu Plus videos hoos ku qoran.
Update: AllMyTube for Mac ayaa kala kulantay dhibaato lama filaan ah ula dajinta Hulu Plus oo waxaan ka shaqeyneynaa sida ugu dhakhsaha badan ee aan awoodno xaliyo. Ilaa iyo inta ay taageerto mar kale soo degsado Hulu Plus, kuu sheegi doonaa.
1 Raadi Hulu Plus videos aad jeceshahay
Fur hulu.com iyo dedeg ah bogga Hulu Plus. Markaas waxaad dooran kartaa aad jeceshahay muujinaya TV inuu u ciyaaro. Waa maxay xusid mudan halkan waa in aad la ciyaareyso videos ku saabsan mid ka mid ah kuwan soo socda saddex daalacashada: IE, Chrome iyo Firefox. Sidaas, videos ah waxaa lagu ogaan karaa barnaamijkan smart.
Copy url video oo riix badhanka URL koollada on furmo suuqa hoose. Markaas barnaamijkan bilaabi doonaan in ay soo bixi video isla markiiba. Ama waxaad uun jiidi karaan url oo ka mid ah video Hulu Plus iyo hoos u barnaamijka aad u bilowdo hawsha.
Waxaa jira hab kale oo kala soo bixi Hulu Plus video. Marka aad mouse ka badan si xaq sare ee shaashadda video ah, waxaa ka muuqan doona sabayn button Download. Riix badhanka iyo barnaamijka bilaabi doonaan in ay ka soo dejisan ee video Hulu Plus si la mid ah.
Fiiro gaar ah: Waxaad ku dari kartaa dad badan oo videos in safka dajinta iyada oo mid ka mid ah saddex siyaabood. Barnaamijkan kala soo bixi kartaa 5-10 videos waqti isku mid ah si aad u badbaadin karo waqti badan.
3 Beddelaan Hulu Plus videos (optional)
Marka videos Hulu Plus waa la bixi, oo aad ka heli kartaa maktabadda soo bixi macluumaad buuxa sida tirada, magacyada video iyo in ka badan. Haddii aad rabto in aad si loogu badalo videos si uu u ciyaaro ee qalabka la qaadi karo aad, waxaa laga yaabaa in aad u baahan tahay si loogu badalo videos ugu horeysay. Riix badhanka badalo ku yaal dhinaca midig ee item video ah oo ay doortaan qaab la mid ah AVI, MOV ama xataa iPad, iPhone in ay qaab wax soo saarka. Markaas riix OK si aad u samaysay.
Fiiro gaar ah: Switch on button toggle of Download markaas Beddelaan dooro qaab door bidayo in uu noqdo qaab wax soo saarka, ka dibna videos Hulu Plus la otomaatik isku beddelaysaa doonaa in qaab ka dib markii lagala soo bixi.
Ka dib markii diinta, aad u videos Hulu Plus wareejin karaa qalabka la qaadi karo sida iPad u loo maqli karo. Fudud, miyaanay ahayn? Waa in aad kala soo bixi barnaamijkan si uu u siiyo shot a. Marna la sii dayn doonaa inaad hoos.